Antsakoamileka-Soalala: efa 70 isan-jaton’ny tanàna no tsy mijangoany intsony | Région Boeny
Antsakoamileka-Soalala: efa 70 isan-jaton’ny tanàna no tsy mijangoany intsony
16 décembre 2016 A La Une, Actualité
Nosafidina manokana ny kaominin’Antsakoamileka, distrikan’i Soalala tamin’ny fankalazam-paritra ny Andro maneran-tany ho an’ny trano fivoahana ny alakamisy 08 desambra 2016.
Araka ny tomban’ezaka taorian’ny ady amin’ny fiparitahan’ny tay ankalamanjana natao tamin’ireo kaominina 46 ato anatin’ny faritra Boeny, dia ny kaominina ambanivohitr’Antsakoamileka no efa lasa lavitra amin’ny fahadiovana. Satria mora nentanina sy nobeazina ireo mponina ka 70 isan-jaton’ny tanànan’izy ireo no efa tsy ahitana jangoany na tay miparitaka ankalamanjana intsony.
«Fampiroboroboana ny tontolon’ny kabone antoky ny asa fivelomana». Io no lohahevitra napetraky ny Ministera mpiahy hanamarihana ity andro ity. Efa samy ahitana Kabone ara-pahasalamana avokoa ireo 70% isan-jaton’ny tanàna ao Antsakoamileka ireo. Ny tetik’asa Mahefa Miaraka, miara-miasa amin’ny Foibem-paritry ny Rano, ny Ofisim-paritry ny Fanjarian-tsakafo ary ny Faritra Boeny no nanatanteraka ny fanamboarana izany tamin’ny alàlan’ny famatsiam-bola amerikana USAID, izay haharitra dimy taona.
Ny fijerena ifotony ny fahavitana sy fanadiahadiana ny fampiasana amin’ny tokony ho izy ireo toeram-pivoahana ireo araka izany no nanamarihana io andro ho an’ny kabone tao Antsakoamileka io.
Antsakoamileka dia kaomina vaovao faha 46, vao niforona ny taona 2014 tato anatin’ny faritra Boeny. Efa manakaiky ny tanjona daholo kosa nefa ny kaominina rehetra hoy ny Talem-paritry ny Rano eto, amin’ireo izay efa nanaovana fanentanana satria 85 isan-jaton’izy ireo no efa afaka amin’ny fangerena ankalamanjana.
Kanefa ny 15 isan-jaton’ireo mponina izay mipetraka amin’ireo kaomina renivohitry ny distrika indray no mbola mangery ankalamanjana, izay hangatahana fiaraha-miasa amin’ireo olom-panjakana rehetra amin’ny fampitaovana sy ny fanabeazana.
Ho an’ireo tokantrano izay nahavita kabone tsotra tamin’ny herin’ny tenany dia notolorana seau fakan-drano tsirairay avy. Ho an’ireo fokontany izay nahavita kabone betsaka indrindra sy ara-pahasalamana kosa dia mbola notolorana loka hafa ihany koa dia ny dalle sanplast mitotaly 17.
Ho ampiana ny mpitsabo ara-pahasalamana miasa eny an-toerana, araka ny fangatahanareo hoy ny fampanantenan’ny Talen’ny Kabinetran’ny Faritra Boeny, Atoa Hemedy, izay nanotrona ny lanonana tany an-toerana.